Ku Cadee Cunadaada Sawirada | Martech Zone
Axad, Oktoobar 8, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Saaxiibkey iyo asxaabteydii, Pat Coyle, ayaa i amaanay bogaadin ku saabsan balooggeyga. Wuxuu yiri mid ka mid ah waxyaabaha uu fiirsado ayaa ah inaan marwalba waqti uqaato sidii aan ugu shaqeyn lahaa sawirada iyo waliba waxyaabaha kujira. Runtii waa run - waa wax aan ku sameeyo gelitaan kasta. Waa tan farsamadayda degdegga ah ee fudud:
Haddii aanan u hayn sawir ama fiidiyow mawduuca, waxaan raadinayaa qayb ka mid ah sawir-qaade wakiil-ka ah shirkadda Microsoft Clipart goobta Waxaan raadiyaa anigoo isticmaalaya Firefox sidaa darteed waxaan si fudud ugu kaydin karaa hibada sawirka miskaheyga si aan si fudud ugu shubo Isticmaalka IE waxay kaa dhigeysaa inaad ku dhex marto barnaamijka farshaxanka 'Clip art art' ee Xafiiska… waxtar kuu leh oo keliya haddii aad dhabtii rabto inaad wax ka beddesho ama dib u cabirto sawirka.
Haddii aan sawir leeyahay, sida caadiga ah waxaan u soo qaadaa sawir-qaade waxaanan isku dayaa inaan cabbiro si aan ugu habboonaado meesha aan haysto. Ma jecli sawirada aadka u yar yar ee qaata boos toosan… Waxaan badanaa isticmaali doonaa isku toosinta = bidix ama isku toosin = midig si aan u dhigo dhinac kasta oo laga soo galo si aysan u gaarin habka loo aqrinayo gelitaanka , laakiin wali waxay ku dareysaa xoogaa midab ah.
Waa tan sababta kale ee aan ugu daro farshaxanka clip: RSS. Marka dadka waawayn ay ka mid yihiin quudintayda, waxaan rabaa in aan ka sooco liistada aan caadiga ahayn ee qoraallada ay helaan maalin kasta. Waxaan is arkaa anigoo iskafaaraya cinwaannada iyo waxyaabaha ku jira… laakiin inta badan kama qaado sawirrada aan ku arko quudinta.
Waa tan muunad… keebaa dareenkaaga qabanaya?
Oo leh sawirro:
Kala saar quudintaada! Isticmaal sawirro! Ma go'aansan karo inay taasi horseed u tahay aqriska ama haynta or laakiin xaqiiqda ah in Pat ogaadey waxay iga dhigeysaa inaan dareemo sidii ay dhici karto.
Oktoobar 12, 2006 at 3:07 AM
Si run. Ilaa iyo inta laga hayo uguyaraan - Waan jeclahay RSS maxaa yeelay waxay jeceshahay dial-keyga 😉